महरा, रोशनी र म्यार्लिन मनरो- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
महरा, रोशनी र म्यार्लिन मनरो
इतिहासको पानामा यी आँखाले अत्याचार भएको पनि देखे, सेकेन्ड भरका गल्तीले धेरैले सजाय पनि पाए  । ५० वर्ष पहिले फर्कौं  ।
म्यार्लिन मनरोको निधन, केनेडी ब्रदर्सले गरेको शोषण र प्रताडनाको कुरा आजसम्म पनि सेलाएको छैन । यस्तै शोषणको सिकार भएर म्यार्लिन डिप्रेस्ड भइन् । उनको मृत्यु आत्महत्या थियो कि सुनियोजित हत्या आजसम्म पनि विवादित छ । अब रोशनी शाहीको घटनाको प्रकृति हेरौं । २०१७ को सिभिल अस्पतालको इमर्जेन्सी रेकर्ड मात्र हेर्ने हो भने पनि रोशनी शाही लामो समयदेखि चरम यौन हिंसाको सिकार भएर डिप्रेस्ड भएको देखिन्छ । के भनौं, एउटी पीडित महिलालाई संरक्षण गर्न नसक्ने, उनीमाथि शक्तिशाली पदमा आसीन व्यक्तिले लामो समयसम्म गरेको शोषणको कडी खोतल्न नसक्ने, यो कस्तो राज्य बनायौं हामीले ? कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो गणतन्त्र ?, कस्तो नागरिक सर्वोच्चता ?
– डा. युवराज सेढाईं, मिचिगन, अमेरिका
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको यौन दुराचार र राजीनामा प्रकरणमा पीडित रोशनी शाहीको डिप्रेसनसम्बन्धी रोगको खबरलाई अत्यधिक उचालेको महसुस भएको छ । यसका लागि पीडितलाई रहस्यमय तरिकाले दबाब दिएर फरकफरक बयान सार्वजनिक गराएको देखिन्छ । पीडितले न्याय नपाउँदै, पतिबाट सम्बन्ध विच्छेदको पहल, प्रवासमा रहेका छोराछोरीसँग सञ्चारहीन अवस्था आदिले उनको घरबार बिग्रने अवस्था देखाउँछ । प्रहरी निगरानीको अवस्थामै अपरिचित व्यक्तिको घर प्रवेशको कारण उनी भयग्रस्त देखिनुले उनको सुरक्षामा प्रश्नचिह्न लागेको छ । पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद हुनुका साथै रोगको कारण उनको जागिरमा समेत खतरा देखिएको छ । आफूमाथि भएको यौन आक्रमणबाट सुरक्षित हुन गुहार लगाउनु रोशनीको अपराध हो ? रोशनीलाई न्याय र सुरक्षा मिलोस् ।
यतिखेर मदिराप्रेमी महराको ह्विस्की ब्रान्ड र कम्युनिस्टहरूका लागि मदिराको महिमा निकै चर्चित बनेको छ । कुनै बेला मदिराको नाम सुन्नासाथ तीन हात पर भाग्ने कम्युनिस्ट चरित्र हिजोआज मदिरा नभई नहुने स्थितिमा पुग्नु आफैंमा रोचक भएको छ । आफूहरूलाई सर्वहाराको नेता ठान्नेहरूले देखाएको मदिरा प्रेमलाई उनका कार्यकर्ताहरूले आलोचना गर्छन् कि अनुशरण ? एक हातमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त र चरित्रको वर्णन गरिएको किताब बोक्ने अनि अर्को हातमा मदिराको बोतल बोक्ने दृश्यलाई बाँकी कम्युनिस्टहरूले कसरी बुझ्ने हो ? केही वर्षअघि एकजना कम्युनिस्ट नेताले भनेको झलझली सम्झन्छु, ‘कम्युनिस्टको शब्दकोशमा मद्यपानको कुरै हुँदैन । कम्युनिस्ट भएर मदिरा सेवन गरेमा त्यो आचरणगत त्रुटि भई कडा दण्डको भागिदार हुनुपर्छ ।’ तर आज अधिकांश कम्युनिस्ट नेताहरू मदिरा नभई नहुने स्थितिमा पुगेका छन् । महरा र रोशनी शाही दुवै कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका हुन् । उनीहरूजस्ता थुप्रै छन् जो आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन् तर हरेक दिन रक्सी नभई हुँदैन ।
दसैंका बेला चाडबाड नभनीकन त्रिभुवन विमानस्थलदेखि सोल्टी होटलसम्मको सडकमा धमाधम पिच गर्ने, रङ–रोगन गर्ने र सजावटका काम रातारात भइरहेको छ  । ४/५ दिनको बीचमा सबै काम सम्पन्न हुनेछन्  ।
यसैगरी सबै ठाउँमा सबै निकाय मिलेर काम गर्ने हो भने काठमाडौंका सबै ठाउँमा सडक मर्मत गर्न ६ महिना लाग्ला तर ६ वर्ष लाग्ने छैन । अहिले जे भइरहेछ के यो विदेशी पाहुनाहरूलाई देखाउन मात्र हो ? देश र जनताका लागि किन काम गर्न सक्तैन ? सार्क शिखर सम्मेलनका बेला, भारतीय प्रधानमन्त्री आउने बेला पनि स्वागत गर्न यस्तै गरिएको थियो । तीनकुनेमा सयौं पटक रूख रोपिएकै हो । अहिले चीनका राष्ट्रपति सीलाई स्वागत गर्न पनि रूख रोपेर हरियाली चित्र/विचित्र बनाइँदै छ । अर्बौं खर्च गरेर विदेशी पाहुनाको आँखामा विकासे छारो हाल्ने काम हुँदै छ । पाहुना आउँदा मात्रै काम हुने हो भने जापान, अमेरिका, बेलायतका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई पनि छिट्टै निमन्त्रणा गर्नुपर्‍यो । सरकारले एकै पटक दिगो हुने गरी तीनकुनेलाई स्थायी हरियाली पार्क बनाउने र सडक सबै ठाउँमा मर्मतसम्भार गर्ने हो भने सबैलाई सधैं स्वागत हुने थियो । स्वागतकै लागि अर्बौं रुपैयाँ खेर जाने थिएन ।
– रेवती सुवेदी, काठमाडौं